About Us - FET fitaovana & Technology Co., Ltd.
Get Fibre simenitra Wall Board & Compressed Fibre simenitra Board Now!
Tsindrio eto mba mangataka A QUOTE
MAIN MARKET OTHER tsipiriany BUSINESS TYPE
Amerika Avaratra Brands: FET BIRAO, BIRAO Manufacturer
Amerika atsimo No. mpiasa: 200 ~ 300
Eoropa Andrefana Isan-taona Sales: 15Million-20Million
Eoropa atsinanana Established Year: 2003
Azia atsinanana Export PC: 50% - 60%
Ningbo FET fitaovana & Technology Co., Ltd. Niorina tamin'ny 2003 tany Ningbo City, miorina ao atsimon'i Shanghai, 50km avy any Ningbo seranan-tsambo.
Isika no lehibe indrindra fanamboarana ny fibre matihanina simenitra birao, kalsioma silciate board ao Shina tamin'ny 4 automic lines.Our orinasa famokarana manarona faritra iray ny 600.000 metatra toradroa isan-taona miaraka amin'ny fahafahan'ny 20,000.000 metatra toradroa.
Manana ny teknolojia avo afa-po ary fantatra ho toy ny faritany ara-tsiansa sy teknolojia novelty.The vokatra no nizaha toetra ny Intertek, SGS, TUV, PSV, ny orinasa dia nankatoavin'ny ISO 9001: 2008 sy ISO14001: 2001, no manome ny mpanjifa in USA , Moyen-Orient, Aostralia, Afrika, Eoropa, Azia Atsimo sy ny sisa.
Ny be no manondrana mandray 60% n'ny famokarana rehetra.
Mandray amim-pahatsorana namana kokoa ny hiara-miasa aminay!
Ningbo FET fitaovana & Technology Co., Ltd. naorina tamin'ny 2003. Noho ny hevitry ny hoe "mitarika toetra, mitondra fiara fanavaozana", ny orinasa manamasina ho fanatitra eran-kolontsaina mpanjifa andian-dahatsoratra izay vokatra mahafa-po ny tinady. Ary efa nahary ny orinasa fandresena fandresena-zava-misy amin'ny mpanjifa sy nahatratra ny fampandrosoana maharitra.
Tao anatin'ny folo taona, FET mifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny orinasa mpamokatra entana, ny vokatra izay afaka manome mpampiasa fun.With sambatra sy ambony toetra sy tsy manam-paharoa fahaiza-mamorona, FET nitarika foana mitana toerana any an-tsaha amin'ny matihanina.
FET ihany koa ny mandoa ny saina ho orinasa andraikitra ara-tsosialy raha mafy-mitombo; isika hahatsiaro ny hevitry ny fiarovana ny tontolo iainana nandritra ny ara-nofo sy ny fampiasana vokatra dingana orinasa mpamokatra entana.
Tsy miasa ny famokarana hentitra araka ISO9001 sy ISO14001, fampiharana TQC mba mandika ny hevitry ny manam-paharoa marika foto-kevitra ao amin'ny fiasan'ny manokana ny feno, mahomby, tontolo iainana sariaka ary tena-modely dingana.
Rehefa mitohy maharitra ny asa mafy, FET dia nametraka mahery Network barotra amin'izao tontolo izao, ny vokatra fa manenika ny tenany isan-tanàna sy ny zana-bohiny faritra. Ao amin'ny tsena iraisam-pirenena, ny orinasa ny mpanjifa pervade any Azia Atsimo Atsinanana, Eoropa, Amerika ary ny Afovoany Atsinanana sy ny hafa firenena sy ny faritra.
Tsy manaraka ny tsena-mifantoka, hampandroso ny vaovao reengineering dingana fanampiny, ataovy mafy fanazavana ara-fomba izay mianatra mpanjifa ho toy ny foibe, ka hanao eran-tambajotra ny fitaovana, vola mikoriana, ary ny vaovao mikoriana. Isika mihazona ny Fanahin 'ny orinasa "Mba hamorona vidiny, ary ny handresy-fandresena mirindra", ny tontolo miteraka ny marika ny firenena Sinoa, ary vonona ny mitombo haingana toy ny iray amin'ireo tsara indrindra maneran-mpamatsy.
Ningbo FET fitaovana & Technology Co., Ltd. naorina tamin'ny 2003. Noho ny hevitry ny hoe "mitarika toetra, mitondra fiara fanavaozana", ny orinasa manamasina ho fanatitra eran-kolontsaina andian-dahatsoratra mpanjifa fahafaham-po ny tinady vokatra izay, ary efa namolavola ny marika miavaka toetra, namorona ny orinasa fandreseny-fandreseny zava-misy amin'ny mpanjifa sy nahatratra ny fampandrosoana maharitra. Tao anatin'ny folo taona, FET mifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny orinasa mpamokatra entana, ny vokatra izay afaka manome mpampiasa sambatra sy mahafinaritra. Avy iray vokatra ho vokatra maro tsipika development.With ambony toetra sy tsy manam-paharoa fahaiza-mamorona, foana izahay mpitarika mitana toerana any an-tsaha amin'ny matihanina.
Manana manam-paharoa kilasy voalohany mpamorona ekipa iraisam-pirenena amin'ny fahitana, ary namorona ny toetra sy endrika miavaka fomba ary antoka ny fitohizan'ny fiakarana avy amin'ny vokatra famolavolana, bobongolo fampandrosoana, orinasa mpamokatra entana, ny marika vokatra sarobidy rafitra.
Manana 4 andalana vokatra avo lenta sy maro automatique mpiasa mahay. Isika indrindra indrindra misahana ny mpanamboatra ny vokatra isan-karazany toy ny fireproof, haingon-trano, UV mifono, hazavana fibre simenitra birao sy ny fandroana diatomite mat.We efa nahazo laza tsara amin'ny ao an-toerana sy tany ivelany tsena.
Manatrika ny Frankfurt isika Paperworld marika tsara Fair amin'ny sary, ary mandray mpanjifa manerana izao tontolo izao-penitra ny vokatra.
Isika Manatrika ny, ao amin'ny ara-drariny, FET BIRAO, BIRAO veloma ny mpanjifa manerantany manara-penitra avoaky ny vokatra, ary koa mampiseho mpividy tsara eran-marika sary.
Exterior Wall Fibre simenitra Board , Exterior Wall Wood Grain Fibre simenitra Board , Fibre simenitra Board Fa Exterior Wall , Exterior Wall Colorful Fibre simenitra Board ,